Izimbangela zezimpawu zokuma ezindwangu zokuluka eziyindilinga
Enqubeni yokuluka yomshini wokuluka oyindilinga, lapho umshini uqala futhi ume, kwesinye isikhathi kuzokhiqizwa indilinga yamamaki avundlile engxenyeni yendwangu, evame ukubizwa ngokuthi uphawu lokuma. Ukwenzeka kwamamaki okuphumula kuhlobene nalezi zizathu ezilandelayo:
1) Kukhona igebe ngenxa yokugqokwa kokhiye wokuphakela umucu wentambo
2) I-coefficient yokuxabana phakathi kwentambo yokudla i-aluminium plate kanye ibhande lamazinyo incane kakhulu, idala ukushelela
3) I thatha phansi roller kwewindows kukhululeke kakhulu, okwenza indwangu ibuyele emuva; noma kunenkinga ngokudluliswa kokwehliswa, futhi i-winder yendwangu isalele emuva.
4) Ukulingana phakathi kwe- ikham track futhi izinaliti zokuluka noma amasinki kukhululeke kakhulu (ukuhlangana phakathi kwethrekhi yekham kanye nezinaliti zokuluka kuhlobene nokushuba kwezinaliti ezisetshenziswayo, izinaliti ezijiyile ziyahambisana, futhi izinaliti ezincane zokuluka ziyoxegiswa.-Imisa Akunconywa ukusebenzisa futhi ububanzi obukhulu bokumiswa kwekham). Lapho ithrekhi yekhamera ivuleke kakhulu ngezinaliti, ingubo yendwangu iyoba miningi futhi ukungezwani kokudla kwentambo kuyobe kukhululekile lapho ushayela kancane; lapho ushayela ngejubane, ingubo yendwangu izoba mncane futhi ukungezwani kwentambo okuxekethile kuzoqina.
5) Uma i-cambox iguqulwa phakathi nendawo, ukwakhiwa nokwenziwa akunangqondo, futhi kuthambekele ekumiseni amamaki.
6) Inkinga efanayo izokwenzeka uma umshini wokuluka ijezi ophindwe kabili ikhululekile kakhulu phakathi kwegiya elikhulu elinamasondo amathathu noma igiya elikhulu lamapuleti kanye negiye le-pinion. Kulula ukudala inaliti engenhla nengezansiamasilinda ukuzamazama lapho uqala noma unyathela amabhuleki, okuthinta ukuqondanisa kwezinaliti ezingenhla nezingezansi.
Isikhathi Iposi: Aug-02-2021